Nhanganyaya kune ballet TUTU kuchengetedza uye kutakurika - Nhau - Fitdance ballet tutu fekitori.
Imba > Nhau > Nhau dzekambani > Nhanganyaya kune ballet TUTU kuchengetedza uye kutakurika
Ichi chinyorwa chiri kunyanya nezve yekuchengetedza uye kutakurika kwetutu. Nzira yakanakisa yekutakura madhirezi etutu ndeyekuaisa muspecial bag. Zvikasadaro, zviri nyore kukuvadza ballet tutu kana iwe ukatakura zvishoma.Kana zvisingaite kutakura tutuflatly, unogona kusunga tutu nebhanhire wobva waisa muhombodo yakashama muromo, kuitira kuti kana uchiiburitsa, ugone kuvhura zvakanaka ruzha rwakakwenenzverwa kwetutu siketi. Iyo siketi iri nyore kutora kunze nechiso pasi. Iyi nzira yekutakura tutu inokodzera chete nzendo pfupi, senge kubhururuka.
Ongorora: Zuva nezuva pamba, sunga ahook kuwadhiropu kana madziro kuseri kwemusuwo uye urembedze tutu. Ballet Tutu tutustorage inoda kuchengetwa yakaoma uye yakachena. Paunenge usipo uye uchisiya tutu muhotera kana hotera, rongedza imwe desiccant. Haufanire kutenga desiccant. Paunotenga mavitamini, kune mamwe mabhegi madiki eesiccant mukati uye iwe unogona kungoabatanidza pamwe chete nematutu tutu madhirezi, ayo akadhura uye ari nyore.
Usaise chero chinhu pane tutu kana kuipeta tootightly, sezvo izvi zvichapwanya tutu uye zvichikonzera kukanganisa. Homwe yekunze inogona kushandiswa kuchengeta magemenzi, matinji, shangu kana zvipoda. Bhegi rinofanirwa kunge riine kusagadzikana pakumanikidza, kuona kuti tutu tutu siketi haizobatirirwa pasi pekumanikidzwa kwekunze.
Yapfuura:Mhemberero uye zano re swan Lake ballet
Tevere:Tutu ballet siketi, yakave yakanaka kwemazana emakore